အသစ်ကဒီဇိုင်း YOUTUBE ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လို - YOUTUBE ကို - 2019
အသစ်က YouTube ကိုဒီဇိုင်းများ၏ပါဝင်
မလုံလောက်သောသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံအလင်းရောင် - ပင်မပြဿနာပုံရိပ်တွေအိပ်လေ၏။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောအားနည်းချက်များကိုမှမြင့်တက်ပေးသည်: မလိုအပ်သောမီးခိုးမြူ, မှိုင်းအရောင်အရိပ်အသေးစိတ်အရှုံးနှင့် (သို့မဟုတ်) ပတ်။
ဒါကြောင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့အနည်းငယ် Photoshop ကို - သင်တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်လှည့်လျှင်, မဟုတ်စိတ်ပျက်လက်ပျက်လုပ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့် "အနည်းငယ်" ပါသလဲ ထိုအကြောင်းကြောင့်အလွန်အကျွံတိုးတက်မှုဓာတ်ပုံကိုဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင်နှင့်မီးခိုးများနှင့်မှိုင်းအရောင်အဆင်းနဲ့အနိမ့်ဆနျ့ကငျြဘနှင့်ပြတ်သား: သင်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့, အားနည်းချက်များရှိပါသည်။
ဒီအရုပ်ပုံသင် program ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အမည်ရှိသောမိတ္တူအလွှာဖန်တီးချင် "နောက်ခံသမိုင်း"။ ငါတို့သည်ဤ hotkey ကိုသုံးပါ CTRL + J ကို.
သငျသညျပုံရိပ်တွေတစ်ခုမလိုလားအပ်သောမီးခိုးမြူဖယ်ရှားလိုစတင်ရန်ရန်။ ဤသည်အနည်းငယ် contrast နဲ့အရောင်ရွှဲမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ခေါ်တော်မူအသစ်အညှိနှိုင်းမှုအလွှာကိုဖန်တီး "Levels နဲ့".
အလွှာ၏ setting ကိုခုနှစ်တွင်ဗဟိုမှအစွန်းရောက်ခြင်းလျှောတင်းကြပ်။ ဂရုတစိုက်အရိပ်နဲ့အလင်းကိုကြည့် - အသေးစိတျ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးလို့မရပါဘူး။
ပုံထဲမှာမီးခိုးမြူပျောက်နေသည်။ သော့အပေါငျးတို့သအလွှာတစ်ဦးမိတ္တူ (ပုံနှိပ်) Create Ctrl + Alt + Shift + E ကိုနှင့်အသေးစိတ်မြှင့်တင်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
အဆိုပါ topsheet တစ်ဦးမိတ္တူ Create (CTRL + J ကို) ထို menu ကိုသွားပါ "Filter ကို"။ ကျနော်တို့ filter ကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည် "အရောင် Contrast" အပိုင်း၏ က "Other".
ဒဏ်ငွေကအသေးစိတ်မြင်နိုင်ကားတစ်စီးနှင့်နောက်ခံ, ဒါပေမယ့်မအရောင်ဖြစ်လာနိုင်အောင် Filter ကို set up ။ ကျနော်တို့က settings ကိုပြီးအောင်အခါ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ OK ကို.
အချင်းဝက်လျော့ကျလာတစ်ဦးကန့်သတ်မှုရှိကတည်းကလုံးဝ filter ကိုအပေါ်အရောင်များ၏အလွှာကိုဖယ်ရှားရရှိသောမရနိုင်ပါ။ သေချာစေရန်, ဒီအလွှာအရောင်သော့ဖွစျစနေို CTRL + SHIFT + ဦး.
ပေါ်အရောင်ဆနျ့ကငျြဘနှင့်အတူအလွှာများအတွက် blending mode ကိုပြောင်းပေးပါ "ထပ်"ဒါမှမဟုတ်အပေါ် "တောက်ပအလင်းများ" ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံကိုချွန်ထက်ရုပ်ပုံပေါ် မူတည်. ။
အဆိုပါပေါင်းစပ်အလွှာ (၏အခြားမိတ္တူ CreateCTRL + SHIFT + ALT + E ကို).
သငျသညျသွေးအခါ, ချွန်ထက်ပုံ၏ "အသုံးဝင်သော" စိတျအပိုငျး, ဒါပေမယ့်လည်း "အန္တရာယ်" ဆူညံသံသာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြသင့်ပါတယ်။ ဒီရှောင်ရှားရန်, သူတို့ကိုဖျက်ပစ်ပါမည်။ မီနူးမှ Go "Filter - ဆူညံသံ" နှင့် step ကိုသွား "ဆူညံသံကိုလျှော့ချ".
သင်တစ်ဦး Filter ကို set up တဲ့အခါမှာအဓိကအရာလွန်တုံ့ပြန်ရန်မဟုတ်ပါ။ ဒဏ်ငွေအသေးစိတ်ဆူညံသံတွေနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားရန်မလိုပါ။
အသံဗလံကိုဖယ်ရှားသောအနေဖြင့်အလွှာတစ်ဦးမိတ္တူ Create, အဲဒီနောက် filter ကို apply "အရောင် Contrast"။ ကြှနျုပျတို့သညျဤအရောင်မြင်နိုင်ဖြစ်လာဖို့ဖော်ထုတ်ဤအချိန်များ၏အချင်းဝက်။
Discoloration အရောင်, ဒီအလွှာကိုမလိုအပ်ပါဘူး, ရန် Blend Mode ကိုပြောင်းလဲ "Chroma" နှင့် opacity ကိုချိန်ညှိ။
အဆိုပါ uppermost အလွှာမှာတော့ 1. တစ်ဦးညှိနှိုင်းမှုအလွှာဖန်တီး "Curves".
2. pipette အပေါ်နှိပ်ပါ (။ Screenshot ကိုကြည့်ပါ) နှင့်အနက်ရောင်အမှတ်သတ်မှတ်, image ကိုအတွက်အနက်ရောင်အရောင်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
4. တစ်ဦးကအဆိုပါကွေး (RGB) အပေါ်တစ်ဦးအနက်ရောင်အစက်အားမရခြင်းနှင့်လက်ဝဲဘက်ကဆွဲအားဖြင့်မြေတပြင်လုံးရုပ်ပုံပေါ့ bit ။
ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်ပြီးပြည့်စုံသည်, ဒါကြောင့် task ကို set ကိုဖျော်ဖြေနေသည်။ ပုံအများကြီးတောက်ပခြင်းနှင့်ပြတ်သားဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဆန္ဒရှိပါက toned နိုင်ပြီးပိုပြီးလေထုနှင့်ပြည့်စုံပေးပါ။
သင်ခန်းစာ: အဆိုပါ Gradient မြေပုံသုံးပြီးဓာတ်ပုံ Toning
ဤသင်ခန်းစာတွင်ပြတ်သားမြှင့်တင်ရန်ဖို့ဘယ်လို, ဓါတ်ပုံများကနေမီးခိုးမြူဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့်, အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အချက်များ setting အားဖြင့်အရောင်ထွက်ဖြောင့်ဖို့ဘယ်လိုဘယ်လိုသိကျွမ်းခြင်းပညာသင်ယူခဲ့တယ်။
ဗီဒီယို Watch: Nerf စကသနတ - အသစက Nerf! Spylight (စက်တင်ဘာလ 2019).